Aniga Iyo Qof Kasta Ayay Amakaag Ku Tahay In Lion Messi Aanu Ku Jirin Tartanka Ballon d'Or-Valverde Oo Dareenkiisa Soo Bandhigay. - Gool24.Net
Aniga Iyo Qof Kasta Ayay Amakaag Ku Tahay In Lion Messi Aanu Ku Jirin Tartanka Ballon d’Or-Valverde Oo Dareenkiisa Soo Bandhigay.
December 2, 2018 Mahamoud Batalaale
Tababaraha kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde ayaa wax lala yaabo isla markaana amakaag ah ku tilmaamay in Lionel Messi aanu ka mid ahayn saddexda xidig ee ku tartamaya abaal marinta Ballon d’Or wuxuuna tilmaamay in qof kasta oo aduunka ahi uu la yaabay markii uu maqlay in Messi aanu ku jirin safka hore ee Ballon d’Or.
Hadlka Valverde ayaa ku soo beegmaya waqti ay wax walba tilmaamayaan in Luka Modric uu ku guulaystay abaal marinta Ballon d’Or isla markaana ay seegeen Crisitano Ronaldo iyo Lionel Messi markii ugu horaysay tobankii sanadood ee ugu danbeeyay.
Valverde ayaa adeegsaday kalmado la mid ah kuwii uu saxaafada ka sheegay macalinkii hore ee xulka qaranka Spain ee Del Bosque kaas oo tilmaamay in ay wax lala yaabo tahay in Messi aanu hogaaminayn liiska ciyaartoyda aduunka ugu fiican inkasta oo uu waliba isagu sheegay in Ballon d’Or uu gabi ahaanba lumiyay qiimihii uu lahaa.
Valverde oo ka hadlaya maqnaanshaha Lionel Messi ee Ballon d’Or ayaa yidhi: “Aniga layaab ayay igu noqotay sida ay qof kasta oo kalaba ugu noqotay in aanu isagu ku jirin xaflada Ballon d’Or. Waa amakaag, isagu waxa uu ahaa ciyaartoygii ugu fiicnaa Champions league, waxa uu ahaa ka ugu fiican todobaadkii kowaad, labaad iyo shanaad ee Champions league, laakiin anagu ma go’aamino waxyaabaas, UEFA ayaa go’aamisa”.
Valverde oo aan faraxsanayn sida ay wax u dhaceen ayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Kuwa halkaas jooga waanu u hambalyaynaynaa, isla markaana qof kastaaba waxa uu ka fikiri karaa waxa ay doonayaan, laakiin, haa waa amakaag”.
Luka Modric ayaa la aaminsan yahay in uu ku guulaysatay abaal marinta Ballon d’Or isla markaana in Cristiano Ronaldo uu kaalinta labaad ku jiro halka Antoine Griezmann la sheegay in uu kaalinta saddexaad buuxiyay taas oo Messi ka saartay saddexda xidig ee aduunka ugu fiican inkasta oo codbixin kaliya tahay oo ayna tayada ciyaartoyda si rasmi ah u go’aaminayn.
Cristiano Ronaldo ayaa la filayay in uu Modric uga xaq leeyahay abaal marinta Ballon d’Or maadaama oo uu ahaa xidigii gool dhalinta ugu badan ka soo sameeyay Champions league oo ay Modric ku soo wada guulaysteen maadaama oo sababta ugu wayn ee Modric laga dhigayay Champions league.
Antoine Griezmann ayaa dhinaca koobka aduunka ugu xaq yeelan lahaa balse marka ay noqoto xogta shaqsi waxaa ugu horayn lahaa Messi balse Modric ayaa la filayaa in abaal amrintan loo caleemi saari doono.